Los Vascos Grande Reserve 2016 ~ ICT.com.mm
HomeLos Vascos Grande Reserve 2016
Los Vascos Grande Reserve 2016
Los Vascos Grande Reserve Cabernet Sauvignon, Carmenere, Syrah (Shiraz), Malbec Alcohol: 14% Dry/ 2016 Colchagua/ Chile Tasting Notes Ruby red color. Complex fruity nose of figs and cedar, tabacco, cinnamon, white pepper... [Learn more]
Brand: Los VascosFilter by: Fine Wine Myanmar, Wine
Cabernet Sauvignon, Carmenere, Syrah (Shiraz), Malbec
Ruby red color. Complex fruity nose of figs and cedar, tabacco, cinnamon, white pepper and mint. Well-structured on the palate with remarkable balanced and consistency.
Enjoy with grilled lamb chops or steak, red sauced pasta or veal parmiggiano. Blue cheese, some hard cheese or Gorgonzala will be perfect to enjoy as well.
ချီလီနိုင်ငံထုတ် Los Vascos Grande Reserve 2016 ဝိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်အမေရိကတိုက်ရဲ့ နာမည်အကျော်ကြားဆုံးဝိုင်စပျစ်ခင်းတွေတည်ရှိရာ ချီလီနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း Colchagua Valley ဒေသမှာရှိတဲ့ Viña Los Vascos ဝိုင်လုပ်ငန်းကနေ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး အဓိကအားဖြင့် ကမ္ဘာ့နာမည်အကျော်ကြားဆုံး အနီရောင်ဝိုင်စပျစ်မျိုး Cabernet Sauvignon စပျစ်ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ Carmenere စပျစ်၊ Syrah (Shiraz) စပျစ်နဲ့ Malbec စပျစ်မျိုးတွေလည်း အနည်းငယ်ရောစပ်ပါဝင်ပါတယ်။ အယ်လ်ကိုဟောပါဝင်မှု (၁၄)ရာခိုင်နှုန်း ရှိတဲ့ Dry/ 2016 ဝိုင်နီ (Bold & Structured) အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ သိုးကလေးသားကင်၊ အမဲသားကင်၊ Red Sauced ပါစတာ သို့မဟုတ် Veal Parmiggiano စတဲ့အစားအသောက်တွေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ချီလီဝိုင်နီဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သော ချိစ်အမာအမျိုးအစားတွေနဲ့လည်း တွဲဖက်သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Los Vascos Grande Reserve isabenchmark for elegance and finesse in Chile. A blend consisting mainly of Cabernet Sauvignon, it is produced using traditional vinification and maturing techniques.The wine is characterized by the complexity and persistence of its bouquet of cherries and blackcurrants (Cabernet Sauvignon), strawberries (Malbec), raspberries (Syrah) and plums, with notes of bay leaves and black pepper (Carmenère).